အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သောနှစ်ကာလများအတွင်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်တွဲဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ဖဲစခုဂ် နှင့် အိုလ်ဗေးယို့စ် ၊ လင့်စတော့ နှင့် အန်ဒါရှောန် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာမှုနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂလိကရေးရာများမှာ ပွန်းရှခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး၌ အိမ်ထောင်နှစ်ခုစလုံး ပြိုကွဲခဲ့သည်။ ထိုဆက်ဆံရေးအခြေအနေပြောင်းလဲမှုများသည် အဖွဲ့၏ ဂီတအပေါ်တွင်လည်း အကြုံးဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့၍ နောက်ပိုင်းရေးဖွဲ့ခဲ့သည့် သီချင်းစာသားများ၌ အမှောင်ဖက်လွှမ်းသော၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်စမ်းစစ်သည့် စာသားများ ပို၍ ပါဝင်လာခဲ့လေသည်။ အားဘာအဖွဲ့ ပြိုကွဲပြီးနောက် အန်းဒါရှော့န် နှင့် အိုလ်ဗေးယို့စ် တို့က တင်ဆက်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် ဂီတများစပ်ဆိုကြ၍ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖက်၌ လင့်စတော့နှင့် ဖဲစခုဂ်တို့သည် တစ်ကိုယ်တော်ပုံစံများဖြင့်သာ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ၏။
အဖွဲ့ပြိုကွဲပြီး ဆယ်နှစ်အကြာ ABBA Gold ဟုခေါ်သော လက်ရွေးစင်အခွေတစ်ခွေကို ဖြန့်ချိခဲ့ကြ၍ ကမ္ဘာအနှံ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး တေးအခွေတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၁၉၉၉တွင် အားဘာအဖွဲ့၏ ဂီတသီချင်းများကို အခြေခံ၍ မာမာမီးယာ (Mamma Mia!) ဂီတပြဇာတ်ကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြေဖျော်ခဲ့ကြကာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Mamma Mia! (မာမာမီးယာ) ဟုပင် အမည်ပေးထားသော ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၀၈ တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ကာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၌ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်လေသည်။ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကား Mamma Mia! Here We Go Again ကို ၂၀၁၈ ၌ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမရှိသော ၃၅ နှစ်တာကာလများအလွန်၌ သီချင်းအသစ်နှစ်ပုဒ်ကို အသံသွင်းထားပြီဟူ၍ ကြေညာခဲ့၏။
အဖွဲ့သည် တေးအချပ်ရေ ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းအား သန်း ၁၅၀ နှင့် သန်း ၃၈၀ ကျော်ကြားရှိ၍ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ဂီတအနုပညာရှင်များထဲတွင် ပါဝင်၏။ အားဘာအဖွဲ့သည် အင်္ဂလိပ်စကားမပြောသောနိုင်ငံမှ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများတွင် တသတ်မတ်အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံး ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ကာ အမေရိက၊ ယူနိုက်တကါကင်းဒမ်း၊ အိုင်ယာလန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတေးလျ၊ နယူးဇီလန်နှင့် တောင်အာဖရိက ဂီတဇယားများတွင် အောင်မြင်မှုများ ရယူနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ဆွီဒင်ဂီတအဖွဲ့များအနက် သမိုင်းတစ်လျှောက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးလည်း ဖြစ်ကာ ဥရောပတိုက်မှ ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပြန်သည်။ အားဘာအဖွဲ့သည် ယူကေ၌ နံပါတ်တစ်အဖြစ် တေးအခွေရှစ်ခုကို ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သည်။ လက်တင်အမရေိက၌လည်း သိသာထင်ရှားသည့် အောင်မြင်မှုရခဲ့ကာ ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားသီချင်းများကို လက်ရွေးစင်ပြု၍ စပိန်ဘာသာဖြင့် သီဆိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့ကို ရော့ခ်အန်ရိုးလ် ဂုဏ်ပြချီးမြှောက်မှု (Rock and Roll Hall of Fame) အတွင်းသို့ ၂၀၁၀ တွင် ထည့်သွင်းချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ရောက်သောအခါ ၎င်းတို့၏ Dancing Queen သီချင်းအား တေးသံသွင်းဆိုင်ရာ အကယ်ဒမီ (Recording Academy) ၏ ဂရမ်မီ ဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်မှု (Grammy Hall of Fame) ထဲသို့ သွတ်သွင်းချီးမြှောက်ခဲ့ကြသည်။
↑ Celebrities။ 10 June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 April 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အားဘာ&oldid=727553" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။